सुशान्तको डिलिट भएको ट्वीटमा के थियो ? त्यसैमा मृत्युको रहस्य लुकेको आशंका – Dcnepal
सुशान्तको डिलिट भएको ट्वीटमा के थियो ? त्यसैमा मृत्युको रहस्य लुकेको आशंका
प्रकाशित : २०७७ असार ११ गते १४:४२
मुम्बइ । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युको मामिलाको जाँच गरिरहेको मुम्बइ पुलिसले ट्वीटरसँग ६ महिनाको रेकर्ड मागेको छ । पुलिसले सुशान्तले आफ्ना केही ट्वीट डिलिट गरेको आशंका गरेको छ ।
सुशान्तले लामो समयदेखि फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेका थिएनन् । फेसबुकमा उनको अन्तिम पोस्ट २०१९ डिसेम्बर २७ मा भएको थियो । यो पोस्ट उनको अन्तिम ट्वीटजस्तै मास्टरकार्डकै बारेमा थिए । इन्स्टाग्राममा भने सुशान्त मृत्युको ११ दिन पहिलेसम्म सक्रिय थिए । उनले अन्तिम पोस्ट आफ्नी आमाको नाममा लेखेका थिए ।